ပေါ် polemic ဥရောပတိုက်တွင်ဘတ်စ်ကားနှိုင်းယှဉ်ရထား တစ်ဦး-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်, လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိကြတယ်။. ဒါပေမဲ့, ကျနော်တို့တောင်မှဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောနေကြသည်, ကျနော်တို့လျှင် - လုံလောက်တဲ့က? ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ ဘေးကင်းရေးသည် အမြဲတမ်း ဦးစားထားသင့်ပါသည်။, ကျနော်တို့ဒီနေ့ဖြေရှင်းနေ. အများအားဖြင့်, လူတွေကွဲပြားခြားနားဒီခေါင်းစဉ်ချဉ်းကပ်လေ့, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နယ်လှည့်အကွိုကျပေါ် မူတည်.. နောက်ထပ်, အတွင်းကမ္ဘာကအချက်န်းကျင်ယာဉ်မတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့စကားကိုနားထောငျနောက်ဆုံးပေါ်သတင်း, အဖြစ်ကောင်းစွာ. သင်တစ်ဦးရထားပျက်ကျမှုတစ်နေရာရာရှိ၏စကားကိုနားထောငျခဲလိမ့်မယ်နေစဉ်, ကဖြစ်ပျက်. ကလေနှင့်အတူမသကဲ့သို့, ကား, ဘတ်စ်ကားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အခြားနည်းလမ်းများ. သော်ငြားလည်း, စာရင်းဇယားရှင်းရှင်းလင်းလင်းများမှာ - တရားဝင်, ရထားဒီရက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လုံခြုံဆုံးသည် Modes ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်! တူညီသော ဘေးကင်းရေး အဆင့်သည် လေကြောင်း သွားလာမှု အတွက်ဖြစ်ပြီး အခြားသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နည်းလမ်းအားလုံး နောက်မှ လိုက်လာပါသည်။.
ရထားသည် နိုင်ငံအားလုံးတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ အလုံခြုံဆုံးပုံစံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။?
အဘယ်သူမျှမ, မဟုတ်ပါဘူး. အားလုံးသံလမ်းနှင့်ရထားအတူတူအရည်အသွေးမ. ကျနော်တို့ရထားလမ်းခရီးသွားဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါ, ကျွန်တော်တို့ဟာအများအားဖြင့်တိကျတဲ့တိုင်းပြည်ဆက်စပ်၌အကြောင်းပြောဆို. ယေဘုယျအားဖြင့်, ရထားလမ်းခရီးသွားအလွန်စိတ်ချ, ဒါပေမယ့် ရထားနဲ့ ခရီးသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံရဲ့ ရထားလမ်းနဲ့ ဆက်သွယ်မှုအခြေအနေကို စစ်ဆေးဖို့ မထိခိုက်သေးပါဘူး။.
နှစ်ဦးစလုံးရထားလမ်းနှင့်ရထားလုံလောက်စွာစောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်သည့်အခါ (တနည်း, မှန်မှန်ဝန်ဆောင်မှုပေး, ထိန်းသိမ်းထား, လိုအပ်တဲ့အခါအစားထိုး, စသည်တို့ကို), သငျသညျခဲအစဉ်အဆက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဤနည်းလမ်းများနှင့်အတူမည်သည့်မတော်တဆမှုသက်သေခံပါလိမ့်မယ်. အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်, လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့မတူပဲ, တစ်လမ်းတည်းနှင့် ခရီးလမ်းတစ်ခုသာရှိသည်။ (တနည်း, မီးရထား) ယင်း၏နောက်ဆုံးဦးတည်ရာမှတဦးတည်းလမ်းကြောင်းသည်အောက်ပါ. အဘယ်သူမျှမမျှော်လင့်မထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်များသင့်ရဲ့လမ်းလာ, သင်ဘီးကျော်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးအောင်. အဘယ်သူမျှမရုတ်တရက်ဆိုင်းနှင့်အလှည့်ရှိပါတယ်, သို့မဟုတ် အခြားစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော အခြေအနေများ. ဤသည်ရထားပို့ဆောင်ရေးယခုအချိန်အထိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လုံခြုံဆုံးသည် Modes ထဲကတစ်ခုကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကဖြစ်နိုင်သည်.
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, လူတိုင်း overworked နှင့်သူတို့၏အလုပ်မှာကုလားထိုင်များနှင့်အပြန်အလှန်၎င်းတို့၏မော်တော်ကားထိုင်ခုံကနေခုန်မယ့်အခါ,, ကြားထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေး အချိန်လေးတွေ ရှိပါစေ။ အရေးကြီးတယ်။. သငျသညျအခက်အခဲအဖြစ်မီးရထားပေါ်မှာငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်းကျိန်းသေလူတွေရထားကိုရွေးချယ်ရခြင်းမှာအကြောင်းများစွာထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ခရီးဝေးရထား၏စကားပြောသော, သူတို့က ခရီးသွားလာရန်စိတ်ကူး option ကို သူတို့တချို့ကျချိန်ကိုခွင့်ပြုအဖြစ်. အမှတ် B ကိုမှအမှတ် A ကနေရယူခြင်းအတွက်2လေယာဉ်အားဖြင့်နာရီထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ချ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်စိန်ခေါ်ပါသလား “မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အလုံခြုံဆုံး mode ကိုတစျခုဖွစျပါသညျ”? သင့်ရဲ့နိုင်သလား ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကို ရာသီဥတု၏ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုကို process, လေထုဖိအား, နှင့်အကြားမှာရှိတဲ့တခြားအရာခပ်သိမ်း? ခဲခက်စွာ. အားဖြင့်ခရီးသွားလာအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ ဥရောပတစ်ဝှမ်းရထား သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် ပြောင်းလဲမှုများကို အလေ့အကျင့်ရစေပြီး ၎င်းတို့ကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ကျန်းမာလမ်း.
ကနျြးမာရေးတစ်ခုသို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရအတိအကျ အကျိုး, ဒါပေမယ့်အိတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချို့ခရီးသည်များအတွက်တော်တော်လေးသိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍ. အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်မယ်ဆိုရင် ခရီးသွားလာမှုအတွက် pack ကိုအလင်း ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ, သင်တဦးတည်းအပိုင်းအစ၌သင်တို့၏အိတ်ချင်တယ်. အများစုမှာခရီးသွားအဖိုးတန်အပိုငျးအများစုဆောင်းနေကြသည်, ရုပ်, စာရွက်စာတမ်းများ, စသည်တို့ကို. သူတို့ သူတို့နဲ့ သူတို့ရဲ့အမှတ်တရတွေကို လိုချင်တယ်။. ကံမကောင်းသဖြင့်, လေကြောင်းခရီးသွား သင်ရထားဖြင့်ခရီးသွားသောအခါဖြစ်ခဲသောပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားသောခရီးဆောင်အိတ်များကြောင့်လူသိများသည်. Plus အား, သင့်ရဲ့အိတ်သင်တို့နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ဖြစ်ပြီး, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအိတ်ကိုပြောဆိုချက်ကိုမှာလုပျနိုငျ. ဒီရထားပို့ဆောင်ရေး၏လုံခြုံဆုံး Modes သာတစျဦးဖွစျသညျဟုပွောဖို့အကြောင်းပြချက် Is? ကျနော်တို့ဒါစဉ်းစား.
#ဖက်ရှင်ပျော့ Ravel	#လုံခွုံသော	#safetravel	#သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး